Ọdụ Ngwere | È Kere Ya Eke?
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kinyarwanda Kirghiz Korean Latvian Lithuanian Macedonian Malagasy Norwegian Oromo Pangasinan Polish Portuguese Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tahitian Thai Tigrinya Tsonga Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
NGWERE nwere ike isi n’elu wụtuo ma o nweghị ihe ga-eme ya. Ma, ọ bụrụ na ebe ahụ o si wụtuo na-amị amị, ọ gaghị ada ebe ọ chọrọ ịda. Ma, ọkọ agaghị akọ ya. Olee ihe kpatara ya? Ọ bụ n’ihi otú e si kee ọdụ ya.
Ihe ị ga-echebara echiche: Ọ bụrụ na ngwere ejide aka n’ihe nwere ezé ma chọọ isi ebe ahụ wụtuo, ọ na-ebu ụzọ wetuo ọdụ ya ala. Nke a na-enyere ya aka ịwụtu ebe ọ chọrọ. Ma, ya nọrọ n’ebe na-amị amị, ụkwụ anaghị esi ya ike. Ya si ebe ahụ mapụ, o nwere ike ịda n’ebe ọ na-achọghị ịda. Ma, tupu ya eruo ala, ọ na-eweli ọdụ ya elu. Nke a na-eme ka o jiri ụkwụ ya na aka ya daa. Mgbe ọ bụla ngwere weliri ọdụ ya elu ma ọ bụ weda ya ala, ọ na-abara ya uru. Nchọpụta e mere na Mahadum Kalịfọnịa nke dị na Bakli gosiri na nke a bụ eziokwu. Nchọpụta ahụ e mere gosiri na tupu ngwere eruo ala, ọ na-eweli ọdụ ya elu. Nke a na-eme ka o jiri ụkwụ ya na aka ya wụtuo. Ọ bụrụ na ebe ahụ ọ nọ na-achị ezigbo ọchịchị, ọ ga-eweli ọdụ ya elu ugboro ugboro ka ọ ghara iji ahụ́ ya daa.
Ọdụ ngwere nwere ike inyere ndị injinia aka ịrụpụta rọbọt ndị e nwere ike iji na-achọ ndị mmadụ ma e nwee ala ọma jijiji ma ọ bụkwanụ mgbe mkpamkpa ndị ọzọ kpara. Nke a ga-eme ka ọ dịrị ha mfe ịkpọpụta ndị dị ndụ. Otu onye na-eme nchọpụta aha ya bụ Thomas Libby kwuru, sị: “Rọbọt adịghị garagara ka ụmụ anụmanụ. N’ihi ya, ihe ọ bụla nwere ike ime ka ọ na-arụ ọrụ ngwa ngwa magburu onwe ya.”
Gịnị ka i chere? Ọdụ ngwere ọ̀ nọkatara dịrị ka ò nwere onye kere ya?